दाँत नियमित नमाझ्ने व्यक्ति सावधान-मधुमेहदेखि मुटुरोगसम्म हुनसक्छ - सुदुर नेपाल
दाँत नियमित नमाझ्ने व्यक्ति सावधान-मधुमेहदेखि मुटुरोगसम्म हुनसक्छ
दाँतको नियमित सफाइ गर्नाले हामीलाई स्वास्थ्यका धेरै जोखिमहरुबाट जोगाउने गर्दछ । धेरै मानिसमा खाना खाएपछि वा दैनिक दुईपटक दाँत माझ्ने बानी हुन्छ । तर केही मानिस भने दिनको दुईपटक त परको कुरा केही दिनसम्म पनि दाँत माझ्दैनन् ।यसरी नियमित दाँँत नमाझ्दा यसले दाँतसहित समग्र शरीरको स्वास्थ्यमा असर पार्ने गर्दछ । तर्सथ दाँत, गिजा र मुखका टिस्युको स्याहार गर्नु हाम्रो समग्र स्वास्थ्य ठीक राख्नका लागि धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यदि नियमित दाँत सफा भएन भने यसले निम्न समस्याहरु देखापर्ने हुन्छ
१.दाँत बिग्रने तथा किरा लाग्ने नियमित दाँत सफा नगर्दा हाम्रो दाँतमा किरा लाग्ने र दाँत बिग्रने हुन्छ । दाँतमा ब्याक्टेरियाले उत्पादन गर्ने इन्जाइमले दाँतका हाड खियाउनुका साथै दाँतमा प्वाल पार्ने र जरासम्म जोड्ने हाड नष्टसमेत हुन्छ ।
२. गिजाको समस्या हुनसक्छ दाँतको सफाइमा ध्यान नदिए यसले गिजामा इन्फेक्सन गर्ने र गम्भीर रोग पनि लाग्न सक्छ । गिजामा इन्फेक्सन भएमा शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने स्थितिसमेत हुन्छ ।
३. मधुमेहको खतरा नियमित दाँत नमाझ्ने मानिसमा मधुमेहजस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन रोगसमेत लाग्न सक्छ । गिजासम्बन्धी रोगबाट ग्रस्त व्यक्तिलाई मधुमेहको सम्भावना उच्च हुन्छ ।
४.मुटुसम्बन्धी रोग हुनसक्छ मुख र दाँतको नियमित सफाइ नगर्ने मानिसमा मुटुसम्बन्धी रोगसमेत लाग्न सक्छ । दाँत सफा नगर्दा मुखमा उत्पन्न हुने ब्याक्टेरिया शरीरको रक्त प्रवाहमा मिसिन्छ र पाचन प्रणालीलगायत विभिन्न प्रणालीमा असर पार्न थाल्छ । परिणाम स्वरुप मुटुरोग, मस्तिष्क घात लगायतका रोगको खतरा हुन्छ ।
५.व्यक्तित्वमा हानी दाँत सफा नगर्ने मानिसको दाँतमा अड्किएका खानेकुरा कुहिएपछि मुख गन्हाउने हुन्छ । मुखमा उत्पन्न हुने ब्याक्टेरिया र कुहिएका खानेकुराको कारण यो क्यालकुलससमेत बन्दछ । जसले मानिसको व्यक्तित्वमा समेत हानी पुर्याउने गर्दछ ।
६.गिजा सुन्निने र रगत आउने दाँत सफा नगर्दा गिजा दुख्ने, सुन्निने र रगत आउनेजस्ता समस्याहरु हुने गर्दछन् । यदि गिजा सम्बन्धी समस्या जिन्जिभाइटिस सुरु भयो भने यसले निकै दुःख दिन्छ ।
र्लाहीमा स’शस्त्र प्र’हरी ब’लले ब’रामद गरेको विभिन्न प्र’जातिका २०० ओटा चरा बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा छाडिएको छ । सदरमुकाम मलंगवास्थित सी’मा क्षेत्रबाट तस्करले सुगा र भँगेरा जातका चरा भारततर्फ लैजाने क्रममा स’शस्त्र प्र’हरीले ब’रामद गरेको हो ।ब’रामद गरिएका चरालाई लालबन्दीस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा ल्याएर छाडिएको जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । भारतबाट चरा लिएर आउँदै गर्दा एउटा भारतीय मोटरसाइकलसमेत ब’रामद गरिएको छ ।
चरा लिएर आउने त’स्कर भने फ’रार छन् । सरकारले विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी बे’चविखनमा प्र’तिबन्ध लगाएको छ । तर, जिल्लाको वन क्षेत्र तथा भारतबाटसमेत ल्याएर लुकिछिपी चराचुरुङ्गीको व्या’पार भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
Previous Post: २०० चरा भारततर्फ लैजाने क्रममा सर्लाही प्र’हरीद्धारा ब’रामद
Next Post: चिसो मौसममा कस्तो खाना खाने ? नखाने